Yintoni i-XR | Ukutshabalala Kwemvukelo
Ukupheliswa kwemvukelo yintshukumo esasazekileyo, yamazwe ngamazwe kunye nezopolitiko ezingathathi cala zisebenzisa inyathelo elingenabundlobongela ngokuthe ngqo nokungathobeli eluntwini ukweyisela oorhulumente ukuba benze ngokuchanekileyo kwiMo yezulu neNgxakeko yeNdalo.
1. Chaza inyani.
Oorhulumente kufuneka bathethe inyani ngokubhengeza imeko yemo yezulu kunye nengxakeko, besebenza namanye amaziko ukunxibelelana ngokungxamisekileyo notshintsho.
2. Thatha ngoku.
Oorhulumente kufuneka bathathe amanyathelo ngoku ukumisa ukulahleka kwezinto eziphilayo ezahlukeneyo kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwegesi yendlu eluhlaza kwi-zero zero ngo-2025.
3. Yiya ngaphaya kwezopolitiko.
Oorhulumente kufuneka benze kwaye bakhokelwe zizigqibo zeNdibano yaBemi malunga nemozulu kunye nobulungisa bendalo.
Nawuphi na umntu okanye iqela linokuzilungiselela ngokuzimeleyo kwaye lithathe inyathelo ngegama nomoya we-XR okoko nje isenzo singena ngaphakathi kwemigaqo kunye neenqobo ze-XR. Ngale ndlela, amandla asasazwa ngokubanzi, oko kuthetha ukuba akukho sidingo sokucela imvume kwiqela eliphambili okanye kwigunya.
Sinombono ekwabelwana ngawo wotshintsho.
Ukudala ihlabathi elifanelekileyo kwizizukulwana ezilandelayo ezi-7 ukuhlala kuyo.
Iintliziyo zethu zisixelela ukuba ilizwe elahlukileyo linokwenzeka. Umbono wethu wotshintsho ubanzi ngokwaneleyo kangangokuba unokuqulatha izimvo ezahlukeneyo malunga nokuba yeyiphi na indlela efanelekileyo yokusebenzela ukutshintsha: "Ilizwe elisempilweni, elihle, apho kuxhaswa khona ubuqu kunye nobuchule, nalapho abantu basebenzisana, ukusombulula iingxaki nokufumana intsingiselo, ngesibindi, amandla nothando. Oku kuya kuxhaswa ziinkcubeko ezendeleyo ukuhlonipha indalo, inkululeko yokwenene nobulungisa. "
Sabeka imisebenzi yethu kwizinto eziyimfuneko.
Ukukhuthaza i-3.5% yabemi ukufezekisa utshintsho lwenkqubo njengokuthi “Ukuququzela okukhawulezileyo kuqhutywe phambili” ukufezekisa oku.
Utshintsho olufunekayo lukhulu kwaye luyenzeka. Akukho lawulo kwinkulungwane yama-20 olwazileyo ukuma ngokuchasene novukelo olwaluthathe inxaxheba ukuya kuthi ga kwi-3.5% yabemi (jonga [intetho kaErica Chenoweth yeTEDx] (https://www.youtube.com/watch?v=YJSehRlU34w) ). Siyavuma ukuba siphakathi kwengxaki enkulu, ekunokuba nzima ukuyiqonda nokujongana nayo. Sijongene nokutshatyalaliswa kweentlobo zeentlobo ezi-6 kwaye asithathi manyathelo alungileyo okuthintela impucuko yethu kwezona meko zoyikekayo zotshintsho lwemozulu. Ihlabathi alilingani ngokunzulu, ngobutyebi kunye namandla okugxininisa kugxile kwincinci encinci. Sineengxaki kwimpilo yethu yengqondo neyomzimba, kubandakanya abantwana bethu, esekwe ngeendlela ezahlukeneyo zokungondleki kunye nendawo enetyhefu. Siphila nesoyikiso sobhubhane ecaleni kokungaphumeleli kwintsholongwane. Inkqubo yethu yezemali imiselwe enye ingxaki enkulu kunale yokugqibela. Kukho inkcubeko yelizwe jikelele yokoyisa "abanye", yokhuphiswano, yokuziphindezela kunye nobunqolobi.
Siyaqonda ukuba umsebenzi wethu unokuba mbalwa malunga "nokusindisa umhlaba" kunye nokuninzi malunga nokuzama ukuphucula ukomelela kwethu njengoko izinto ezininzi zisenzeka. Sijolise kakhulu kutshintsho olubonakalayo:
Idemokhrasi esebenzayo, apho abantu banayo iarhente yokwenyani ekuthathweni kwezigqibo. Oku kungabandakanya ukunikezelwa kwamandla kwelona nqanaba likufutshane ebantwini nasekuhlaleni, kunye nemibutho yokuququzelela ukwenziwa kwezigqibo ekuhlaleni, kwingingqi, kuzwelonke nakumazwe aphesheya, apho kufanelekileyo.
Uqoqosho olwenzelwe ukwandisa impilo-ntle yabo bonke abantu kunye nokunciphisa ukwenzakalisana, izidalwa esisebenza kunye nazo kunye neplanethi yethu yekhaya. Sifuna imigaqo-nkqubo kunye nemithetho efezekisa ukulingana okukhulu, imveliso yangaphakathi, ukunciphisa ukusetyenziswa, zero ukukhutshwa kwekhabhoni kunye nenkunkuma.
Ukudala inkcubeko yokuzihlaziya. Singaqala ukwenza oko ngoku! (Jonga 3. Apha ngezantsi kwaye ungene ngaphakathi).
Singagxila kwiimpawu zale nkqubo inetyhefu, ukanti sikwathatha amathuba ukubonisa ukuba utshintsho lwenkqubo epheleleyo luyafuneka. Sijolise kwiintsika ezigcina inkqubo yangoku yenkululeko.
Ityala kunye nenzala esekwe kwicandelo lezemali.
Idemokhrasi eyinkohliso nebolayo.
Imithombo yeendaba ibanjiwe kwimidla yabantu abaxhaphazayo abazizityebi kunye neenkampani.
Sifuna inkcubeko yokuzihlaziya.
Ukudala inkcubeko enempilo, ikwazi ukulungelelanisa nokuguquguquka.
Inkcubeko yokuzihlaziya yabantu isempilweni, yomelele kwaye iyakwazi ukuziqhelanisa; ukhathalele iplanethi kwaye ukhathalele nobomi ekwazini ukuba le yeyona ndlela isebenzayo yokwenza ikamva eliqaqambileyo loluntu lonke. Inkcubeko yokuzihlaziya ithetha ukuphucula unyaka nonyaka, ukuthatha amanyathelo amancinci okuphilisa kunye nokuphucula, nakuwo onke amanqanaba, kubandakanya abantu, uluntu, umhlaba wethu, amanzi nomoya. Ngaphezulu kokuba sisinxibelelanisi "samatshantliziyo", sifuna ukufumana iindlela zobukho kunye nokwenza inkxaso yenkqubela phambili elungileyo. Oku kungabandakanya umsitho kunye nomthandazo (ngeendlela ezinganyanzelekanga okanye ezingalindelekanga) njengeefomathi zokufumana inkuthazo kwizinto ezinkulu kunathi. Kufuneka siphinde sixhumane nothando lwethu ngeziqu zethu, ilizwe lethu kunye nabantu bethu kunye nabamelwane bethu ngokubanzi; abantu kunye nehlabathi lendalo.
Inkcubeko yokuvuselela ibandakanya ukugxila okusempilweni kwiindidi ezixhasayo:. Ukuzinakekela: sizikhathalela njani iimfuno zethu kunye nokuchacha kwethu kule nkqubo inetyhefu. Ukhathalelo lwamanyathelo: indlela esikhathalelana ngayo ngelixa sithatha amanyathelo ngokuthe ngqo kunye nokungathobeli eluntwini kunye. -Ukhathalelo lomntu: indlela esibunyamekela ngayo ubudlelwane esinabo, sinika ingqalelo kwindlela esibuchaphazela ngayo abanye, sithatha uxanduva kwicala lethu lobudlelwane. Ukhathalelo loluntu-silukhathalela njani uphuhliso lwethu njengothungelwano kunye noluntu, ukomeleza unxibelelwano lwethu kunye nokunamathela kule migaqo kunye neenqobo ezisemgangathweni. Abantu kunye nokunakekelwa kwePlanethi - indlela esibajonga ngayo uluntu lwethu ngokubanzi kunye nomhlaba osigcina sonke.
Imalunga nobudlelwane. Ubudlelwane bethu neziqu zethu kunye neembali zobuqu, ubudlelwane bethu nento esilwa nayo, ubudlelwane bethu nabanye abantu imihla ngemihla, kunye nolwalamano lwethu njengeqela-ezi zixhomekeke ngokupheleleyo. Ukuzikhathalela kukwajongana nokunakekelwa kwamalungu ezilwanyana aphendula ngokwendalo kwiimeko zoxinzelelo ngokulwa okanye ukubhabha okanye ukuphelelwa ngamandla.
Sizicel 'umngeni ngokuphandle kunye nale nkqubo inetyhefu.
Ukushiya indawo yethu yokuthuthuzela sizothatha isenzo sotshintsho.
Sinoxanduva lokungathobeli le nkqubo etshabalalisa ubomi emhlabeni kwaye ayilunganga kwaphela. Abanye bethu baya kwenza amanyathelo avulekileyo ("ngaphezulu komhlaba") abeka emngciphekweni wokubanjwa kunye neerhafu. Ubungqina bucebisa ukuba ukungathobeli okuvulekileyo kuluntu kunye nokuthatha amanyathelo ngokuthe ngqo kubalulekile ukuba kutshintshwe (Jonga umzekelo ubungqina kwiCounterPower nguTim Gee kwaye Olu luVukelo luka-Engler kunye no-Engler). Akunyanzelekanga okanye kufunwa ukuba wonke umntu enze oku, njengoko abanye bekho izizathu ezifanelekileyo zokuba (sicela wonke umntu ukuba athathe ixesha lokucaca kwiimeko zakhe, uloyiko kunye nezizathu apha). Ngokubalulekileyo, inkcubeko yethu yokuVukela ngokuBulala kufuneka ixhase abo kuthi bazimisele ukuzibeka emgceni ngale ndlela - zininzi iindima zenkxaso eziluncedo kwaye kufuneka senze ukuba ubuncinci i-3% yabemi ukuba bathathe inxaxheba. Siza kuziqhelanisa nenkcubeko yokhuseleko ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba sikwazi ukwenza amanyathelo acwangciswe ngaphandle kokungeniswa ngaphambi kokuba agqitywe. Nangona kunjalo ukungathobeli kwethu eluntwini kunye nezenzo ngokuthe ngqo kukukhanya okugcweleyo koluntu, abaququzeleli bayayamkela imingcipheko abayithathayo, kwaye sikhuphe "inkcazo eyimfuneko" kwi-Intanethi malunga nokuba kutheni sikholelwa ukuba isenzo sethu silungile. Nangona kunjalo asikuko nje ukuba phaya kwaye sithathe inyathelo, kufuneka sisebenzise yonke imiba yenkcubeko yokuvuselela kwaye sithathe ixesha lokucinga ukuba ingaba le nto siyenzayo iyasebenza na. Sinokukufumana kunzima ukuba sigxile kwezinye izinto zalo msebenzi, kubandakanya ukuzikhathalela kunye nokujongana. Kunokubakho ukutsala ukwenza into elandelayo, ukuba "usebenze", kodwa oku kungakhokelela ekutshisweni.
Kukho ixabiso kuthi elenza utshintsho kubomi bethu ukubonisa utshintsho olufunekayo, njengokutshintsha izidlo zethu, apho siya khona ngeholide njalo njalo (nangona uxanduva lomntu lunokugqithiswa kwaye lusekwe, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, kwilungelo) . Kuyo yonke le mingeni sicela indawo, umonde kunye nokuzimisela ukuzama izinto ezintsha ukubona ukuba ziyazixhasa iinjongo zethu.
Siyabulela kwaye siyabathanda abo bazimisele ukuthatha amanyathelo "angaphantsi komhlaba" okanye "okufihlakeleyo" ukulwela okusingqongileyo kunye nobulungisa kwezentlalo, nakwezinye iimeko. Ukucaciswa, kunye nokhuseleko lwabo baququzelela i-Extinction Rebellion kubalulekile ukuba sicace gca ukuba onke amanyathelo athathwe egameni le-Extinction Rebellion "aphezu komhlaba," okt ukuba athathwe evulekileyo kwaye akukho manyathelo angaphantsi komhlaba athathiweyo. njengoMvukelo wokuQotywa.
Sikuxabisile ukubonakalisa nokufunda.
Ukulandela umjikelezo wezenzo, ukucinga, ukufunda, nokucwangcisa amanyathelo amaninzi. Ukufunda kwezinye iimeko kunye namava ethu.
Asazi ukuba izinto ziya kutshintsha njani ukuze sikulungele ukuzama kwaye sifunde kwinto esiyenzayo. Ngokuqhubeka nokubuza imibuzo, sicamngce kwaye sifunde malunga noko kusebenze kwenye indawo siya kuphucula into esiyenzayo kwaye singabambeki ekuziphatheni okuphindaphindwayo. Le yinkqubo esebenzayo neqhubekekayo, efuna ixesha negalelo lomntu ngamnye kunye namaqela ukuba acinge malunga noko kuhambe kakuhle kwaye kutheni, kungcono ukuba kwenziwe ngokwahlukileyo.
Samkela wonke umntu kunye neendawo zonke zomntu wonke.
Ukusebenza ngokukhawuleza ukudala iindawo ezikhuselekileyo kunye nezifikelelekayo.
Njengombutho sizibophelele ekukhankaseni ilungelo lobomi, nakwikamva labantwana bethu nakwiplanethi. Siyaqonda ukuba ukuze sitshintshe umhlaba, kufuneka sitshintshe indlela esicinga ngayo kwaye sakhe ubudlelwane nabo sisebenzisana nabo kunye nathi. Umhlaba okwangoku uchazwa zii-hierarchies ezininzi zobuhlanga, udidi, isini, isini, njl.njl. Kwaba baphantsi ezantsi, uninzi lwehlabathi aluyondawo ikhuselekileyo. Ukudala iindawo ezikhuselekileyo kufuneka sisebenze ngokuzimisela ukuze siqhubeke sakha ukuqonda ukuba zisebenza njani ezi hierarchies, ukuze sibacele umngeni kwaye sakhe ukubandakanywa ngokwenza iindawo zethu zifikeleleke ngakumbi. Ke ngoko, ukuze intshukumo yethu ikhuseleke kuye wonke umntu, kufuneka ikhuseleke kwabona bahlelelekileyo.
Lo mthetho-siseko ubandakanya ukuzibophelela ekwenzeni iindawo ezikhuselekileyo zokuxhasa ukubandakanywa. Yinjongo yethu ukuba wonke umntu amkelwe ngaphandle kokukhetha ubuhlanga, ubuhlanga, udidi, isini, isazisi, ukubonisa ngokwesini, isini, ubudala, umvuzo, amandla, imfundo, inkangeleko, inqanaba lokufudukela kwelinye ilizwe, inkolelo okanye ukungakholelwa kunye namava omzabalazo Wonke umntu ekuhambeni unoxanduva lokudala kunye nokugcina iindawo ezikhuselekileyo, ezinobubele kunye nokwamkela. Abantu abatsha kulo mbutho kufuneka bamkelwe ngokucacileyo. Isiqalo esilula kukulandela le migaqo iphambili.
Ubundlobongela ngokwasemzimbeni okanye ukukhuthaza ubundlobongela kwabanye akwamkelekanga. Ukuziphatha okucalucalulayo, ulwimi okanye indlela yokuziphatha ebonisa ukongamela ngokobuhlanga, isini, ulwa-semitism, islamophobia, homophobia, ukwazi, ucalucalulo ngokodidi, ucalucalulo malunga nobudala kunye nazo zonke ezinye iindlela zengcinezelo kubandakanya nolwimi oluhlukumezayo kwabanye abantu, nokuba kukwenzekile okanye kwenye indawo, ayisiyiyo yamkelwe nokuba yeyasemzimbeni okanye kwi-Intanethi.
Siyaqonda ukuba singabantu abantsonkothileyo kwaye sibonisa iindawo ezininzi ezahlukeneyo ngamaxesha ahlukeneyo nakwiimeko ezahlukeneyo. Umzekelo, ngamanye amaxesha sinokuba nenkathalo, ngamanye amaxesha sigwebe, kwaye ngamanye amaxesha singakhathali. Ezinye zezo ndawo ziyinxalenye yethu esivuyayo ukuzisa, kwaye ezinye zezo ndawo ziyinxalenye esilwa nayo, okanye mhlawumbi ungazi nokuba zikhona de ziveze. Ngolu lwazi, sijongana sisuka kwindawo enovelwano, kwaye sikhuthazana ukuba sandise ukuziqonda kwethu.
Sisebenza ngokunciphisa amandla.
Ukudiliza amanqanaba okuba namandla okuthatha inxaxheba ngokulinganayo.
Sikuphepha ukugxeka nokuhlazisa.
Siphila kwinkqubo enobungozi, kodwa akakho umntu ozakutyholwa.
Ukugxeka kunye neentloni akusayi kusinceda ekuhambeni kwexesha. Ngelixa iphulo elithile linokufuna ukuqaqambisa indima eyonakalisayo edlalwe liziko, kubandakanya nabantu abasebenza kwelo ziko, indawo yethu yokuqala kukuba siphila kwinkqubo eyityhefu eye yonakalisa wonke umntu. Singabonisa indlela yokuziphatha engancediyo, exhaphazayo okanye ephethe gadalala, kwaye asizukuyinyamezela loo nto, ukanti asilugqithisi uthando lwethu okanye amandla ngokubeka ityala nokuhlazisa. Oku kuyinyani nakwindlela esinxibelelana ngayo kunye neqela elinamandla kunye nolwalamano lwethu neziqu zethu.
Silwamkela utshintsho oludala ubunye kwiyantlukwano; Kufuneka silungise ubudlelwane phakathi kwethu, siphephe imigibe yokunxibelelana evela kwimidlalo esinokuthi siyidlale singaqondanga kwaye sizise ulwazi kumacandelo anokusahlula. Siyayamkela into yokuba ngamanye amaxesha imvakalelo kufuneka ibonakaliswe, ukuba ixesha lokuvula umoya lingafuneka. Siyacela omnye nomnye ngobabalo olulungileyo kwindlela esabelana ngayo ngemvakalelo kwaye sibuyele kwisiseko sothando, intlonipho kunye nokuqiniseka. Kufuneka sibe nemfesane xa kusenziwa iimpazamo. Iimpazamo ngamathuba okufunda. Sijonge iindlela zokudibanisa nokuqonda. Ukumamelana ngokunzulu sisixhobo esinamandla. Ngokukodwa kufuneka simamele abo bethu bavela kumaqela abo amazwi abo athambileyo ukuba athuliswe.
Ukusebenzisa isiscwangciso esingenabundlobongela nesingenasivikelo kunye namaqhinga njengendlela efanelekileyo kakhulu yokunceda abantu, uluntu, amaqumrhu kunye namaziko azisa utshintsho.
Ukungabikho kobundlobongela kugcina intshukumo yethu iphila. Sisebenzisa ukungabikho kobundlobongela ukutyhila abona bantu babangela ubundlobongela benkqubo abantu abahlupheka yiyo yonke imihla kwihlabathi liphela. Sisicwangciso-qhinga sethu ukuzisa ukukhanya kokungabikho kokusesikweni okusokola kakhulu kubantu abaninzi mihla le. Siva iintlungu ngenxa yokuphathwa gadalala ngamapolisa nabanye, kwaye sizakuhlala sibhenca ubundlobongela babo ngoqeqesho lwethu. Ukungabikho kobundlobongela kuboniswe ngokungathandabuzekiyo njengesixhobo esisebenzayo ekuhlanganiseni abantu abaninzi (jonga umsebenzi weGene Sharp kunye no-Erica Chenoweth) kwaye ke siseke ilitye lembombo lokuhamba kwethu koku.
Kwangelo xesha linye siyayiqonda into yokuba abantu abaninzi kunye neentshukumo emhlabeni bajongene nokufa, ukufuduswa kunye nokuphathwa gadalala ekukhuseleni okwabo. Asiyi kubagweba abo bakhusela ngokufanelekileyo iintsapho zabo kunye noluntu ngokusebenzisa amandla, ngakumbi njengoko kufuneka siqonde ukuba kaninzi lilungelo lethu elisigcina sikhuselekile. Simi kubumbano nabo bangenalo ilungelo elinjalo lokubakhusela kwaye ke kufuneka bazikhusele ngeendlela ezinobundlobongela; oku akuthethi ukuba siyaluxhaphaza lonke ubundlobongela, kuba nje siyaqonda ukuba kwezinye iimeko kunokuba kufanelekile. Kananjalo asizigxeki ezinye iintshukumo zentlalo nezokusingqongileyo ezikhetha ukonakalisa ipropathi ngenjongo yokuzikhusela kunye nendalo, umzekelo ukukhubaza i-rig yokuqhekeza okanye ukubeka indawo yokuvalelwa. Uthungelwano lwethu, nangona kunjalo, aluyi kwenza monakalo omkhulu wepropathi ngenxa yomngcipheko kwabanye abathathi-nxaxheba ngumbutho.
Sisekwe kukuzimela kunye nokwabela abaphantsi amagunya.
Siqokelela ngokubambisana izakhiwo esizidingayo ekujongeni amandla kumngeni. Nabani na olandela lemigaqo-siseko kunye nexabiso angathatha inyathelo egameni leExtinction Rebellion.
Siyaqonda ukuba asinakho ukujonga kurhulumente ukusombulula iingxaki zehlabathi. Ityekele ekugxininiseni amandla kunye nobutyebi ezandleni zabambalwa abanelungelo elikhulu, kwaye ihlala ingenazimfuno zesininzi sabantu kunye nehlabathi lendalo entliziyweni. Siyaqonda ukuba kufuneka sizicwangcise ngokwethu ukufezekisa iimfuno zethu, ethi kwimeko yokuPhela kweNtshabalalo kuthetha ukuba sisebenzela ukulinganisa amandla ngokuphazamisa iintsika eziqhelekileyo zamandla ezilawula ubomi bethu. Ngokwenza njalo, injongo yethu kukudala ukufikelela kwizibonelelo esizifunayo, ezinje ngemibutho yedemokhrasi eqinisekisa ukuba wonke umntu unelizwi nefuthe, ulwazi oluza ngaphandle komkhethe wabazizityebi nabanamandla, ukhathalelo lwempilo olufanelekileyo, imfundo, ukhathalelo lwentlalo kunye izindlu, ukuveliswa kwamandla acocekileyo, kunye nokukhuselwa emthethweni ukukhusela i-ecocide.
Nawuphi na umntu okanye iqela elinokuzilungiselela ngokuzimeleyo kwimicimbi evakalelwa kakhulu ukuba iyabacinezela, kwaye bathathe inyathelo egameni nomoya woQhushululu lwe-Extinction - okoko nje isenzo singena ngaphakathi kwemigaqo kunye nemilinganiselo ye-Extinction Rebelli. Ngale ndlela, amandla asasazwa ngokubanzi, oko kuthetha ukuba akukho sidingo sokucela imvume kwiqela eliphambili okanye kwigunya. Sikwazisa izimvo "zolawulo lobuzwilakhe" ngaphezulu kwemvumelwano: -Ukuba kungavunyelwana kwiqela elinye okanye abantu ababini benze umsebenzi othile kwiqela. Abo bantu ke banikwe amandla ngokupheleleyo ukwenza lo msebenzi. -Bangcono ukufuna iingcebiso kunye nengxelo kodwa abayidingi imvume yomntu ukuze bagqibe umsebenzi. -Banoxanduva olupheleleyo lweziphumo kwaye kufuneka babonakalise kubo kunye nendlela yokuphucula kwixa elizayo. Ukuba kukhona okungahambi kakuhle kufuneka bancede "bacoce".
Kwangelo xesha, njengothungelwano, i-Extinction Rebellion izilungiselela ukubonelela ngeemfuno zabantu abathatha inxaxheba kuyo, isebenza ukubonelela ngoqeqesho kwisenzo seqhinga lotshintsho, ukuzifundisa kunye nokufundisa ngemicimbi yamandla, ilungelo kunye nendlela yokwenza i-decolonise, ukudala ukufikeleleka okungcono, ukukhathalela iimfuno zethu zeemvakalelo ngokunxulumene nokusebenza kunye, kunye nokwenza ixesha lonxibelelwano kunye nolonwabo.
Ukupheliswa kwemvukelo yintshukumo yehlabathi esebenzisa ukungathobeli eluntwini elingenabundlobongela kumzamo wokuphelisa ukutshabalala kobuninzi kunye nokunciphisa umngcipheko wokuwa koluntu. Nge-31st ka-Okthobha u-2018, amatshantliziyo ase-Bhritane ahlangana ePalamente Square eLondon ukubhengeza iSibhengezo semvukelo kurhulumente wase-UK. Kwiiveki ezimbalwa ezalandelayo kwakuza isaqhwithi somoya. Abavukeli abangamawaka amathandathu bahlanganisana eLondon ngenjongo yokuthula ngoxolo iibhlorho ezintlanu ezinkulu ngaphesheya kweThames. Imithi yatyalwa phakathi ePalamente Square, kwembiwa umngxuma apho ukungcwaba ibhokisi emele ikamva lethu. Abavukeli bazincamathele kakhulu kumasango eBuckingham Palace ngelixa befunda ileta eya kuKumkanikazi. Ukupheliswa kwemvukelo kwazalwa. Ikhwelo labavukeli ngokukhawuleza laba lihlabathi liphela, kunye namaqela avela kwiveki elandelayo eYurophu, e-US, kwaye kungekudala emva kwehlabathi liphela. Ayinakhokeli kwaye iyinyani kwihlabathi liphela, iqela ngalinye elitsha lenza intshukumo yomelele, izisa iimbono ezintsha, ubulumko, ubungcali, amandla kunye nenkuthazo.
Ixesha lokwenza ngoku.
Izicwangciso-nkqubo zesiko njengokucela, ukubhengeza, ukuvota kunye noqhanqalazo azisebenzi ngenxa yomdla osisiseko wemikhosi yezopolitiko noqoqosho. Inkqubo yethu ke yenye yeendlela ezingenabundlobongela, ukuphazamisa ukungathobeli eluntwini-imvukelo yokuzisa utshintsho, kuba zonke ezinye iindlela ziye zasilela.
Sijoyine kwaye wenze ngoku
1. Joyina imvukelo! 2. Fumana iqela lakho 3. Ziqeqeshe